Bixinta Kharashka | FXCC
Home / Bixinta lacagaha / Waxyaabaha Lacagta Sheega ee Forex
Shirkadda Shirkadda gaarka ah
FXCC waxay ku dadaaleysaa inay bixiso macaamiil cusub oo hadda jira oo bixiya dallado xayeysiin ah. Qeybtan waxaad ka heli doontaa macluumaadka hadda ee ku saabsan horumarinta forex ee our. Wax walba waxaa la abuuraa macaamilka maskaxda, ka caawinta kor u qaadida khibradooda ganacsiga. Haddii aad tahay bilawga ama ganacsade joogta ah, macaamil waqti dheer ah ama kaliya ka bilaabo FXCC, waxaanu sameyn doonaa sida ugu fiican ee aanu u dabooli karno baahiyahaaga.
200% Bixinta Lacagta + Kaashashka wax walba oo ganacsi ah
Ka dhig fursadan cajiibka ah si aad u kasbato gunno gaar ah!
Si fudud u furo xisaabtaada, samee deegto, oo aad hesho
200% deposit bonus ilaa $ 10,000 oo lagu daray
Dib u soo celin kasta oo badan oo ganacsi!
Waa maxay sababta u degsan heerarka marka aad ku fiicnaan kartid lacag dheeraad ah? Ku bilaw ganacsiga bilawga wareegyada Zero, naaquska eber, calaamad darro, khidmad eber ah iyo faafin fara badan oo ka bilaabma sida eber.
Ganacsatada doonaya in ay sare u qaadaan ganacsigooda heer xirfadeed cusub, laga yaabo inay mar uun bilaabaan inay bartaan mareegaha MetaTrader, iyagoo haysta adeegga khaaska ah ee khaaska ah laga yaabo in marxaladda xigta.
U dir Dhowr saaxiib &
Labaduba waxay helaan abaalmarin
Ku soo dhowow FXCC Barnaamijka Saaxiibtinimada, oo loogu talagalay inuu ka caawiyo macaamiisheena inay qiimo ka helaan ganacsigooda ayna helaan faa'iidooyin dheeraad ah! U dir saaxiibadaada FXCC waxaanad ku abaalmarin doontaa ilaa $ 250 lacag! Maxay naga dhigeysaa mid ka duwan? Waxaan sidoo kale abaalmarinaa saaxiibkaaga!
Baro xirfadaha ganacsigaaga
Ka faa'iideysta $ 50 Bilaash - bilawga lacag-bixinta bilaashka ah iyo kobcinta khibradaada ganacsiga ee jawiga ganacsiga aduunka ee FXCC. Dareemo xiisaha dhaqaale ee suuqa Forex oo aan lahayn deebaajin bilowga ah. (DHACAY)
100% WADARKA BIXINTA + Dib U Yeelashada Lacageed
Ganacsiga Kick-bilaabida FXCC ee dhinacaaga iyo laba jibbaar lacagtaada ugu horeysa ee 100% Bilaash Bilaabashada! Qaad kasta oo ganacsi ah, waxaad heli doontaa abaalmarin dheeri ah! (DHACAY)
50% FURSAN BONUS + Abaalmarinada Dib Loogu Kexeysto
Ka dhig inta ugu badan ee ganacsigaaga leh XFXCC 50% Maalgelinta Maaliyadeed ee kor ku xusan sanduuq kasta oo aad sameyso! Dusha sare ee gunnada, marka aad wax badan ka ganacsatid, lacag dheeraad ah ayaad heli kartaa! (DHACAY)